I Boom Mount Campampamp China Manufacturers & Suppliers & Factory
I Boom Mount Campampamp - umkhiqizi, ufektri, umhlinzeki waseChina
(Yonke imikhiqizo engu- 24 ye-I Boom Mount Campampamp)
25x23X500mm Pure matte carbon fiber wagobhoza ama-boom
25x23X500mm Pure matte carbon fiber wagobhoza ama-boom I-Carbon fiber tube isetshenziswe kabanzi emasimini we-hitech, anjenge-aerospace, imishini yokuthunga yanamuhla, imboni yezolimo, imishini yezokwelapha, izimoto, imishini yokwakha, ukwakha, izinto zemidlalo nezokuzijabulisa, ukuxhumana ngocingo, ukufudumeza...
Izintambo Zezitulo ZaseMountain Road Bike Seat Incazelo Yomkhiqizo I-aluminium clamp evundlile evamile ukuyisebenzisa ku-octagonal carbon fiber tube.Yizingxenye ezimbili ezihlukene futhi idinga isikulufa ukuyifaka. Sinezintambo ezivundlile ze-aluminium kanye ne-roll aluminium clamp . Imininingwane: Umbala: omnyama /...
Ikhamera ye-CNC enemibala ye-aluminium vest arm mount
Ikhamera ye-CNC enemibala ye-aluminium vest arm mount I-Hobbycarbon ingumkhiqizi ochwepheshe okhethekile ezingxenyeni ezithile ze-Aluminium machined, se-carbon fiber CNC yokusika insiza kanye nokuphrinta logo cishe iminyaka eyishumi. Izingxenye ze-Aluminium ze-CNC inqubo yokukhiqiza efezwa ngokucindezela okukhulu noma...
I-aluminium quadcopter motor Mount yangokwezifiso
I-aluminium quadcopter motor Mount yangokwezifiso I-Hobbycarbon ingumkhiqizi ochwepheshe okhethekile ezingxenyeni ezithile ze-Aluminium machined, se-carbon fiber CNC yokusika insiza kanye nokuphrinta logo cishe iminyaka eyishumi. Izingxenye ze-Aluminium ze-CNC inqubo yokukhiqiza efezwa ngokucindezela okukhulu noma...
CNC RC racing aluminium motor Mount
CNC RC racing aluminium motor Mount I-Hobbycarbon ingumkhiqizi ochwepheshe okhethekile ezingxenyeni ezithile ze-Aluminium machined, se-carbon fiber CNC yokusika insiza kanye nokuphrinta logo cishe iminyaka eyishumi. Izingxenye ze-Aluminium ze-CNC inqubo yokukhiqiza efezwa ngokucindezela okukhulu noma ukushaya...
CNC inkambiso eqondile ye-aluminium gimbal Mount
CNC inkambiso eqondile ye-aluminium gimbal Mount I-Hobbycarbon ingumkhiqizi ochwepheshe okhethekile ezingxenyeni ezithile ze-Aluminium machined, se-carbon fiber CNC yokusika insiza kanye nokuphrinta logo cishe iminyaka eyishumi. Izingxenye ze-Aluminium ze-CNC inqubo yokukhiqiza efezwa ngokucindezela okukhulu noma...
I-aluminium anodised motor Mount yangokwezifiso ye-606 aluminium anodised motor FPV
I-Hobbycarbon Custom 6061 aluminium anodised motor Mount ye-FPV I-Hobbycarbon ingumkhiqizi ochwepheshe okhethekile ezingxenyeni ezithile ze-Aluminium machined, se-carbon fiber CNC yokusika insiza kanye nokuphrinta logo cishe iminyaka eyishumi. Izingxenye ze-Aluminium ze-CNC inqubo yokukhiqiza efezwa ngokucindezela...
I-30mm Aluminium Tube Clamp Mount Motor yeRC
I-30mm Aluminium Tube Clamp Mount Motor yeRC I-12mm-30mm yangaphakathi ye-aluminium carbon fiber tube clamp clamp, ukubukeka kwe-cnc machining ukubukeka okuhle, ukwelashwa komhlaba. Izinga eliphakeme lekhwalithi ephezulu ye-aluminium multi-axis universal, isebenzisa indiza ye-aluminium yendiza, ukukhanya kwesisindo...
I-CNC Alloy 25mm Tube Boom Mount Clamp
I-CNC Alloy 25mm Tube Boom Mount Clamp I-12mm-30mm yangaphakathi ye-aluminium carbon fiber tube clamp clamp, ukubukeka kwe-cnc machining ukubukeka okuhle, ukwelashwa komhlaba. Izinga eliphakeme lekhwalithi ephezulu ye-aluminium multi-axis universal, isebenzisa indiza ye-aluminium yendiza, ukukhanya kwesisindo...
I-Carbon Fiber Windsurf Boom
I-Carbon Fiber Windsurf Boom Incazelo Yomkhiqizo Amashubhu we-Carbon fiber roll asongwe alungele zonke izinhlobo zamaphrojekthi wokwakha adinga isisindo esincane somdlalo wokuphamba esisebenza kahle ongabhekana namandla asuka kunoma iyiphi indlela. Amashubhu e-carbon fiber asongelwe aqinile endaweni yonke futhi...
Incazelo Yomkhiqizo I-carbon fiber tube yethu egcwele yenziwa ngezinto ezihlanzekile akukho ukungcola.Ohlobo lwekhabhoni yakho yi-T300. Ngaphandle kweCarbon Fiberi Pole, futhi sinama-Carbon Glass Tubes we-Highth-amandla, i-Carbon Mixed Glass Tube ne-Glass Fiber Tube Indwangu: I-100% yekhabhoni fiber, i-Vinyl resin,...
I-25mm Carbon Fiber Tube - Boom 450mm 1.Introduction I-Carbon fiber tube inezinzuzo zamandla aphezulu, impilo ende, ukumelana nokugqwala, isisindo esincane nokuqina okuphansi. Kusetshenziswa kabanzi kuma-kites, indiza yendiza eyindiza, amabakaki wezibani, imishini ye-PC imishini, imishini yokufaka, imishini...
Ama-booms wekhamera yekhamera enemibala engu-3k 1.Introduction Inani le-carbon fiber elisetshenziselwe ukwenziwa kwamashubhu e-carbon fiber linquma ngokuqondile ukusebenza komshini nokubaluleka. I-carbon fiber tube inezimpawu zesisindo sokukhanya, ukuqina namandla aphezulu, kepha ukunakekelwa okukhethekile kufanele...
I-Carbon Fibre Boom ye-RC Helikopta 1.Introduction Amashubhu e-Carbon fiber anezinzuzo zamandla aphezulu, impilo ende, ukumelana nokugqwala kanye nesisindo esikhanyayo. Kusetshenziswe kahle kites, izindiza imodeli izindiza, amabakaki ahlukahlukene, imishayo imishini, imishini ezenzakalelayo, imishini yokufaka,...
I Boom Mount Campampamp I-Boom Mount Campampamp Round Tube Mount Clamp I-FPV Motor Mount I-Aluminium Joint Clamp Shape Bracket I-30mm Tube Clamp I-Aluminium Rod Clamp yeKhamera I-UAV Drones Clamp